251211N+ ကမ္ဘာမကြေ ၊ ခမောက် ၊ ခွပ်ဒေါင်း ၊ ဗမာကြက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » 251211N+ ကမ္ဘာမကြေ ၊ ခမောက် ၊ ခွပ်ဒေါင်း ၊ ဗမာကြက်
251211N+ ကမ္ဘာမကြေ ၊ ခမောက် ၊ ခွပ်ဒေါင်း ၊ ဗမာကြက်
Posted by nature on Dec 25, 2011 in Creative Writing | 12 comments
မြန်မာနိုင်ငံတော်သီချင်းဆိုသောအခါ ကမ္ဘာမကြေဟူသောစကားလုံးပါသည်ကိုမြန်မာပြည်သူားတိုင်းသတိထားမိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကမ္ဘာမကြေ ဟူသောစကားလုံးသည် ပညတ်သွားရာဓါက်သက်ပါဆိုသကဲ့သို့ တကမ္ဘာလုံး မကျေမနပ်ဖြစ်နေမည်ဟုထင်မြင်ယူဆမိသဖြင့် မနှစ်သက်မိချေ။ မည်သို့မည်ပုံ ထိုစကားလုံးပါလာသည်ကိုတော့မသိပါ။ ကာရန်မိရန်ထည့်လိုက်ရပုံရပါသည်။ ကာရန်မိရန်ထည့်လိုက်သည်ဆိုကလည်း …သာသနာမြေ ဒို့ဘိုးဘွားအမွေအနှစ်မို့ချစ်မြတ်နိုးပေ …ဟုဆိုက ဗုဒ္ဓသာသနာသည်မြန်မာပြည်သူားများ၏ အမွေအနှစ် ဖြစ်သည်ဟူသော အဓိပါယ်ဖြင့် ပိုမိုသင့်လျှော်မည်ဟုထင်မိပါသည်။
NLD ပါတီစတင်တည်ထောင်ခါစက ခမောက်ပုံကိုပါတီတံဆိပ်အဖြစ်ရွေးသောအခါ ကျွန်တော်သည်ရိုးရှင်းသောခမောက်ပုံကိုရွေး သဖြင့်ရိုးရှင်းလွန်းသည်ဟုအပြစ်တင်မိပါသည်။ သို့သော် သူတို့ဖွင့်သောအဓိပါယ်ကို သိသောအခါတွင် ချီးကြူးမိလေသည်။ ခမောက်သည် လူတို့၏ထိတ်ဆုံးမှ နေ၍ အရိပ်ပေးပြီးအေးချမ်းစေသည်ဟုသိရသောအခါတွင် ချီကြူးမိလေသည်။ ယခုအခါခွပ်ဒေါင်းကိုရွေးမည်ဟု သိရပါသည်။ ခွပ်ဒေါင်းတံဆိပ်သည် ၈၈ အရေးအခင်းတွင်ကျောင်းသားများသုံးစွဲခဲ့သောတံဆိပ်ဖြစ်ပါသည်။ အဓိပါယ်က မည်သို့ရှိပါလေသနည်း။
ခွပ်ခြင်းဟူသည် ရန်ဖြစ်ခြင်း ၊ ဆတ်ဆတ်ထိမခံခြင်း ၊ ရန်လိုခြင်းသဘောများလားဟုတွေးတောမိပါသည်။ ခွပ်ခြင်း ရန်ဖြစ်ခြင်းသည် နိုင်ငံတော်သီချင်းတွင် ပါဝင်နေသောကမ္ဘာမကြေဟူသော အချက်နှင့်လည်း ကိုက်ညီနေပေသည်။
ဒေါင်း ဟူ သည် ပိုကာဒေါင်းလိုပွဲပြီးခြင်းပေလော ၊ down ဟူသောကျဆုံးခြင်း ကံဆိုးခြင်းပေလာ။
ခွပ်ဒေါင်းဟူသည် ခွပ်လိုက်တိုင်း down သွားသော တိုက်ပွဲတိုင်းကျဆုံးသော အဓိပါယ်ဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ်မိပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်က ဈေးထဲတွင် ကြက်သားဝယ်လျှင် ကြက်သားဘယ်ဈေးလည်း ။မွေမြူရေးကြက်ဘယ်ဈေးလဲ မေးလေ့ရှိပါသည်။ ယခုအခါတွင်မူ မြန်မာကြက်နှင့် စီပီကြက်ဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲလာကြပါသည်။ မြန်မာကြက် မြန်မာကြက်နှင့် ပညတ်သွားရာ ဓါက်သက်ပါဆိုသကဲ့သို့ မြန်မာတွေ ကြက်ဖြစ်ကုန်မည်ကို စိုးရိမ်မိပါသည်။ မိန်းခလေးတွေကို” စော် ” ဟု ဘန်းစကားဖြင့်ခေါ်သည်မှာလည်းအချက်တချက်ဖြစ်ပါသည်။
ပစ္စည်းတခုခုဝယ်လို့ဈေးသက်သာရင် ဈေးပေါတယ်လို့ ပြောကြတဲ့သူများပါတယ်။ ပေါတယ်ဆိုတာထက်ဈေးချိုတယ်လို့ ပြောရင်ပိုပြီးအဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
မြန်မာလူမျိုး ဆိုတာ အတိတ်နဲ့ နမိတ် နဲ့ တဘောင် နဲ့ နေခဲ့တာ လို့ သိရပါတယ် ။ ယနေ့ လက်ရှိတိုင် ၊ ကိုယ့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တစ်ခုခု ဖြစ်တာ ကို အတိတ်ကောက်နေကြတဲ့ ရှေးလူကြီးတွေ ရှိနေတုန်းပါ ။
ကျုပ် ကိုယ်တိုင်လဲ ၊ ၂၀၀၀ခုနှစ် က မူဆယ် မြို့မှာ လမ်းစရိတ်ကုန်လို့ ၊ လမ်းဘေး ကွမ်းယာဆိုင်လေးထဲမှာ ထိုင်ပြီး ညစ်နေတုန်း ၊ မူဆယ်မြို့ မှာ မီးလန့် တာနဲ့ ကြုံလို့ ၊ ကြံမိကြံရာ အတိတ်ကောက်ပြီး ၊ ၃၆ကောင် ထိုး ၊ ၃၆ ကောင် ထီ ပေါက်ပြီး ၊ လမ်းစရိတ်ရတာ ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ် ။
အဖြစ်အပျက်က ဆန်းလှပါတကား ကိုပေ… ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကို ကိုပေ့ အရေးအသားနဲ့ ဆို ဖတ်ကောင်းမယ့် ပို့စ်တပုဒ်တော့ ဖြစ်လာမယ်ထင်ပါ ကြောင်း….
ကိုယ့်အယူနဲ့ကိုယ်ပေါ့လေ.
မိဘတွေကတောင် ကျနော်တို့ ကိုနာမည်ရမ်းပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဗျ
အယူနဲ့ .မျှော်လင့်ချက်နဲ့ .ဗေဒင်နက္ခတ်နဲ့ ..နောင်ရေးအတွက် ကြိုတွေးပြီး ပေးခဲ့တာကလား
သေချာတာကတော့ တိုက်ဆိုင်ရင် အယူမှန်မယ်..
မီးလန့် တာနဲ့ .. ၃၆ ကောင်ထိုးတာနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူး.
ကြက်ကန်း ဆန်အိုးတိုးချင်တော့လဲ..အဲလိုပဲ.မဆိုင်ပဲနဲ့ ..ပေါက်သွားသတဲ့..
ဒါကြောင့် မှန်ချင်မှန်မယ်.မမှန်ချင် မမှန်ပါဘူး
သဘာဝ လဲ ကျပါတယ် ၊ မြန်မာနိုင်ငံတော် သီချင်း က စပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲကြရင်..
အန်တီစုလဲ သတိထားပါ၊ ဘယ်နိုင်ငံတော်အလံမှာမှ့ သတ္တ၀ါ ပုံမပါဘူး၊
တခြားမြောက်မြားစွာသော သင်္ကေတများသုံးစွဲလျှင်လဲ အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်မှု
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော်အထက်ပါ ပို့စ် ကို ထောက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ၊၊
ကာရန်မိရန်ထည့်လိုက်သည်ဆိုကလည်း …သာသနာမြေ ဒို့ဘိုးဘွားအမွေအနှစ်မို့ချစ်မြတ်နိုးပေ …ဟုဆိုက ဗုဒ္ဓသာသနာသည်မြန်မာပြည်သူားများ၏ အမွေအနှစ် ဖြစ်သည်ဟူသော အဓိပါယ်ဖြင့် ပိုမိုသင့်လျှော်မည်ဟုထင်မိပါသည်။
ကို nature ….
ကျနော့် ကို နဲနဲလောက် ဆွေနွေးခွင့် ပြုပါ။
မြန်မာနိုင်ငံတော်သီချင်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံသူ/သား အားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်တဲ့ သီချင်းပါ။
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဟာ လူမျိုးတစ်စုတစ်ဖွဲ့ကိုးကွယ်ရာဘာသာတစ်ခုတစ်ဖွဲ့ နှင့်တည်ထောင်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။
လူမျိူးပေါင်းရာကျော်နဲ့ကိုးကွယ်ရာဘာသာ အသီးသီးရှိကြပါသေးတယ်။ ဗုဒ်ဓဘာသာတစ်ခုတည်း ရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူး။
ကို nature ပြောသလို ကျနော်တို့ က ကာရန်ငဲ့ ပြီးပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် ဗုဒ်ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ 
ဘာသာခြား မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ် မငဲ့ ညှာရာမရောက်ပေဘူးလား။ သူတို့ တွေမှာလည်း စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တဲ့ဥနှောက်၊ ခံစားတတ်တဲ့နှလုံးသား ရှိကြပါတယ်။
ကျနော်က အများတကာပြောတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အနှစ်ကျကျ နားမလည်နိုင်သေးတဲ့ လူပါ။
ဒါပေမယ့်စည်းကမ်းတကျ လွတ်လပ်မှုနဲ့ သာတူညီမျှရှိတဲ့ဘယ်စနစ်ကိုမဆို အားပေးပါတယ်။
ဒါက ကျနော့် တစ်ဦးတည်း အမြင်ပါ။ တိုက်ဆိုင်မှုလွဲခဲ့ ရင်လည်း sorry ပါပဲ ခင်ဗျာ….
သီချင်းသည်ကြီး ဒေါ်မာမာအေးက BBC တွင်အပတ်စဉ်လွှင့်နေကြ “ပြောစရာတွေ တစ်ပုံကြီး ရှိသေးတယ်”အမှတ်စဉ် ၁၃၅ မှာ ဒီလိုလေး ပြောပြသွားပါတယ် ……။
မာအေးတို့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ တစ်ပါတီ ခေတ်ထဲမှာ အခြေခံဥပဒေ တစ်ကြိမ် ထပ်ပြီး ရေးဆွဲခဲ့ရာမှာလည်း နိုင်ငံတော်သီချင်း ပါစမြဲပါပဲ။ ဂီတ စာဆိုများကို ရေးစေတာပါပဲ။ ဒီခေတ်ကျတော့ ကိုယ့်လူတွေ ကိုယ့်အကိုတွေ မောင်တွေချည်းပဲဟာ – သိရတာပေါ့၊ သူတို့လည်း မရေးချင်ကြပါဘူး။ သူတို့ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် ရှိကြပေမယ့် ဘယ်သူမှ သီချင်းသစ် တစ်ခုခုကို မရွေးခဲ့ကြဘူး။ လွတ်လပ်အဦး ကူပေးဖူးတဲ့ အသီးသီးသော ကျေးဇူးရှင်တွေလို့ လေးစား နေရာထားတတ်တဲ့ အမျိုးချစ်စိတ်ကြောင့်တဲ့။ ကိုယ်တိုင် ခံယူချက်တွေကို ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတော်သီချင်း ‘ကမ္ဘာမကြေ’ ဟာ မပြောင်းမလွဲ တည်တံ့ခဲ့တာပါရှင်။
ကဲ – တို့ဗမာကိစ္စ အတိုအထွာ မှတ်စရာလေးတွေ တေးထားတာကို ပြောရရင် တို့ဗမာအစည်းအရုံးကြီးကို ဗဟန်း ရေတာရှည်လမ်း၊ ခြံအမှတ် ၃၃ သခင်ဘသောင်းနေအိမ်မှာ ၁၉၃၀ ပြည့်နှစ် မေလ ၅ ရက်နေ့က ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ တို့ဗမာသီချင်းကို သခင်ဘသောင်း စာရှာပြီး ၀ိုင်အမ်ဘီဆရာတင်က သီချင်းအဖြစ် ရေးပါတယ်။ တို့ဗမာသီချင်းကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် သထုံဆောင် သဟာယနဲ့ စာဖတ်အသင်းမှာ ဇူလိုင် ၁၉ ရက်နေ့က စတင် သီဆိုခဲ့တယ်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားထဲက ပထမဆုံး သီဆိုခဲ့တဲ့သူကတော့ ‘သခင်ချင်းစိန်’ ပါတဲ့ရှင်။ နောင်အခါ သခင်ချင်းစိန်ဟာ ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာကြီး ဦးချင်းစိန်ခေါ် ခေတ်ဟောင်း ဂီတစာဆို နဲ့ အဆိုတော် ရုပ်ရှင် မင်းသားကြီး ရွှေညာမောင် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သီချင်းဖွင့်ပွဲကိုတော့ ရွှေတိဂုံ စေတီတော် ရာဟုဒေါင့် တန်ဆောင်းကြီးမှာ ၁၉၃၀ ပြည့် ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီမှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ သခင်ဘသောင်းက သီချင်းအဓိပ္ပာယ်များ ရှင်းပြ၊ သခင် သခင်မဘွဲ့တွေ ခံယူ ခေါ်သုံးကြဖို့ ဟောပြောပြီး ၀ိုင်အမ်ဘီကြီးက သခင်တင် နာမည် ပြောင်းကာ ကိုယ်တိုင် ဆိုပြခဲ့ပါသတဲ့ရှင်။
မြန်မာ တူ ပေါ်တူဂီလား
ပေါ်တူဂီ တူ မြန်မာလား သိချင်တယ် သူကြီးရေ
တို့ဗမာသီချင်းကို ရေးခဲ့တဲ့သူတွေ အဲဒီ့လောက်တော့ မလုပ်ခဲ့လောက်ဘူးထင်တယ်
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်ခေတ်မှာ မျက်စိကြီး နားကြီးတဲ့ သူတွေ တပုံကြီးထဲမှာ
အရေးကြီးတဲ့သီချင်းကို ကော်ပီ မလုပ်လောက်ဘူးထင်တာပဲ
ကြားဖူးတာ တခုတော့ ရှိတယ်။ ခမောက်ဆိုတော့ ခဏလေးနဲ့ စုပ်တယ်တဲ့.. အဲလို ပြောတာ ကြားဖူးတယ်။ ခမောက်တွေ နိပ်ကွပ်ခံရတော့ အဲဒီစကားမှန်တယ်လို့ တွေးမိနေတယ်။
အခု ခမောက်မပါတဲ့ ခွပ်ဒေါင်း (Dawn) ကတော့ အလွန်ကောင်းပါတယ်။
kai ပြောသွားတာတွေကို ကြိုက်ပါတယ် ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အယူဆိုတာ ယူတဲ့သူပေါ်မှာလဲ အများကြီး မူတည်တယ်လို့ စာတွေမှာ ဖတ်ရလို့ပါ ဒီလိုပဲ နမိတ် မှာလဲ ဒီအတိုင်းပါပဲ ။
အဲ” နိုင်ငံတော်သီချင်းအလိုက်ဟာ.. ပေါ်တူဂီသီချင်းတခုနဲ့တူနေတယ်ဆိုတာ” လေးကိုတော့ အမြန်လေးသိချင်ပါတယ် ။ အရှက်တကာ အရှက်တွေထက် ပိုလို့ ရှက် စရာ ဖြစ်နေမှာမို့ပါ ။
နောက်တစ်ခု ပြောချင်တာလေးကတော့ မြန်မာကြက်လို့ သုံးမဲ့ အစား အ်ိမ်မွေးကြက် ဒါမှမဟုတ် ရိုးရိုးကြက် လို့ ခေါ်ဝေါ် သုံးနှုန်း ဖို့ကို အကြံပေးလိုပါတယ် ။
ခွတ်ဒေါင်း လွှတ်ကောင်း ကျနော်ကတော့ အလံမှာအနီရောင်ပါတာကို ကြိုက်တယ်
သဂျီးမင်း အမှုမှန်ပေါ်အောင် ရှာပေးမယ်ထင်ပါတယ် ………